Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny Digue : Mpirahalahy namoy ny ainy, iray hafa miady amin’ny fahafatesana -
AccueilSongandinaLozam-pifamoivoizana teny amin’ny Digue : Mpirahalahy namoy ny ainy, iray hafa miady amin’ny fahafatesana
13/09/2017 admintriatra Songandina 0
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray teny amin’ny Digue akaikin’ny lalam-baovao, tamin’ny alatsinainy alina lasa teo, tokony tamin’ny 10 ora sy sasany tany ho any. Mpirahalahy, manodidina ny 40 taona sy 37 taona no indray namoy ny ainy vokatr’izany. Lehilahy iray hafa , izay voalaza fa naman’izy ireo, isan’ny tao anatin’ilay fiara 4×4 V8 niharan-doza kosa no mbola miady amin’ny fahafatesana, eny amin’ny sampana fameloman’aina etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, amin’izao fotoana izao. Araka ny fitantaran’ny havan’ireo maty, dia tsy nahenoana fofon’ alikaola tamin’izy telolahy tao anaty fiara ireo,fa noho ny fandehanana mafy diso tafahoatra , izay nahatratra hatrany amin’ny 140 kilometatra isan’ora, no nahatonga ny loza. Tsy voafehin’ny saofera intsony ny familiana ka nifatratra avy hatrany teny amin’ny rindrim-bato, eny amin’ny Digue iny. Potika tanteraka vokatr’izay dona mafy izay ny lohan’ilay fiara tsy mataho-dalana , sy ilay rindrim-bato niantefany, ary izao namoizana ny mpamily sy ny iray tampo aminy izao. “ Ny an’ilay zandriny, nisy vy nitsofoka teo amin’ny firihifany dia nivoaka teo amin’ny andriny indray avy eo.Samy tapan-tanana sy tapan-tongotra kosa izy mirahalahy, izay hita potipotika mihitsy, ary izao samy namoy ny ainy izao”, hoy ihany fanomezam-baovao . Raha ny voalaza hatrany, dia ohatran’ny nahavoa azy roalahy ireo ihany koa, no nahazo ilay lehilahy mpiray tanàna amin’izy ireo, izay hahatahorana ny ainy.
Araka ny fantatra ihany koa, dia avy aty an-drenivohitra, handeha hamonjy fodiana eny Ambohibao izy telolahy ireo izao tratran’ny tsy nampoizina izao.” Mbola nisy aina izy ireo tamin’ny fotoana nitondràna azy teny amin’ny hopitaly manaram-penitra, saingy tsy tana intsony izany rehefa tonga tety amin’ny hopitaly HJRA”, hoy ihany ny fanampim-baovao. Matetika hitrangana lozam-piarakodia sy moto eny amin’iny lalam-baovao iny, ary vao tamin’ny volana aogositra no nitrangana loza tahaka ity niseho ity, teo amin’io toerana io, izay namoizana ain’olona roa ihany koa. Tsy fanajana hafainganam-pandeha torak’ity niseho tamin’ny alatsinainy alina ity ihany koa no niteraka ny loza tamin’izany. Misy moa ireo milaza fa misy lolo eny amin’iny faritra iny, izay tsy voaporofo ny tena fahamarinany, saingy tsy azo lavina kosa fa azom-panahy handeha mafy foana ireo mpamily , rehefa mandalo eny amin’iny Digue iny. Tsy fantatr’izy ireo, na odian’izy ireo tsy hita anefa fa miteraka tsy fifehezana ny familiana izay miafara amin’ny famoizan’ain’olona, izany tsy fitandremana sy tandrevaka hataon’izy ireo izany. Matoa ihany koa misy ny lalàna napetraka mahakasika ny hafainganam-pandeha, dia natao hajaina izy ireny. Efa misy moa ny fepetra noraisina ny amin’ny hametrahana takela-by manambara fa mety hampidi-doza ilay lalàna , ka tokony handeha mora.Tokony handray ny andraikiny ihany koa ny kaominina, hanisy “casseur de vitesse” eny amin’iny lalana iny, mba tsy hiverenan’ny loza mahatsiravina tahaka izao , fa ihany koa ho balizy ho an’ireo mpampiasa lalàna rehetra.
Tohin’ny fiaraha-miasa efa naharitra 45 taona. Roa volana taorian’ny fitsidihan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Sina, mihamafy hatrany ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta. Tonga omaly tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny vary fanampiana milanja 2.100 ...Tohiny
Ambohijatovo : Azo sary ilay mpisoloky gaigilahy
Fanomanana fifidianana : Nirotsaka ny 1,2 tapitrisa Dolara
Fandriam-pahalemana sy fiakaran’ny vidim-piainana : Hapetraka ny « task force » hanara-maso